Shacab Soomaaliyeed oo Laga Tarxiilay Magaalada Laascoonood - WardheerNews
Shacab Soomaaliyeed oo Laga Tarxiilay Magaalada Laascoonood
Laascaanood, (WDN)- Ciidamada booliska ee magaalada Laascaanood ee Xarunta gobolka Sool, ayaa lagu soo warramayaa in ay habeenkii xalay billaabeen hawlgal lagu ugaadhsanayo dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Koonfur Galbeed.
Hawlgalka oo lagu sheegay mid lagu sugayo ammaanka magaalada Laascaanood oo dhawaanahan ay ka dhacayeen dilal qorshaysani, ayaa lagu soo qaqabtay dad ay tiradoodu gaadhayso ilaa 700 oo qof oo ay ku jiraan ganacsato meherado ku lahaa magalaadaas, dumar, waayeel iyo carruur fara badan.
Warka ayaa waxa uu intaa ku darayaa in dadkan maanta lagu soo ururiyay garoonka kubbadda cagta ee laascaanood, halkaana gawaadhi lagaga daabulay iyadoo mas’uuliyiintu sheegeen in la geyn doono deegaanada ay u dhasheen.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysaa iyadoo hadda ay magaalada Laascaano ku suganyihiin tiro wasiirro ah oo uu hoggaaminayo Maxamed Kaahin oo isagu u qaabilsan dhanka Arrimaha Gudaha maamulka Somaliland.
Taliyaha booliska gobolka Sool
Dhanka kale taliyaha Ciidanka Booliiska gobolka Sool Axmed Cabdillaahi Cabdi, oo ay saxaafaddu wax ka weydiisay sababta keentay in ay mastaafuriyaan dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ayaa dadkaas ku tilmaamay dad ajaanib oo aan Somaliland u dhalan.
“Dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya waa ajinabi, waxayna noola mid yihiin Itoobiyaanka oo kale. waana ka saaraynaa Laascaanood, annaga Soomaali ma nihin waxba nagama gelin, waxaanu nahay Somaliland” ayuu yidhi taliyuhu.
Hadalka taliyaha oo dadka Soomaaliyeed badankiisa la yaab ku noqotay ayaa si aad ah baraha bulshada loogu hadalhayay saacadihii aan soo dhaafnay.
Magaalada Laascaanood oo xarun u ah gobollada SSC, ayaa gacanta u gashay maamulka Somaliland sannadkii 2007kii ka dib markii ay ka eryeen maamulka Puntland oo xilligaas ka talin jiray.